Sony VPL-PWZ10 Projector (White) ~ ICT.com.mm
HomeSony VPL-PWZ10 Projector (White)
Sony VPL-PWZ10 Projector (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Laser light source, Lumen 5000,WUXGA Resolution (1280 x 800), Speaker 16Wx1, Long Lasting Lamp Life 20,000 Hours, Screen Size: 40″ to 300″ (measured diagonally) (1.02m to 15.24m), Contrast ratio-500,000:1,... [Learn more]
Laser light source, Lumen 5000,WUXGA Resolution (1280 x 800), Speaker 16Wx1, Long Lasting Lamp Life 20,000 Hours,
Screen Size: 40″ to 300″ (measured diagonally) (1.02m to 15.24m),
Throw ratio-1.28:1 to 1.88:1,
2xHDMI, Video in, VGA, RJ-45, USB Type A, USB Type B, Mdl: VPL-PWZ10
ပုံရိပ်ကောင်းကောင်းတွေကို ကြည့်ရှုစေနိုင်မည့် Projector ကောင်းတစ်လုံးဖြစ်သည်။ Sony ၏ Advanced BrightEra 3LCD projection engine ကြောင့် တောက်ပပြီး အသေးစိတ်ချယ်မှုန်းထားသည့် ရုပ်ပုံကားချပ်များကို ကြည့်ရှုနိုင်သလို 5,000 lumens ရှိသည့် တောက်ပမှုနဲ့ အရောင်အသွေးစိုပြေမှု၊ အရောင်တည်ငြိမ်မှုတို့ကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ PC presentations, Videos များကို ပုံမှန် Projector များထက်အသေးစိတ် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မီးလုံးအနေဖြင့် Z-Phosphor laser light source ကို အသုံးပြုထားပြီး နာရီ 20,000 အထိ သက်တမ်းကြာရှည်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားတာကြောင့် ခဏခဏထဖောက်တတ်တဲ့ မီးလုံးပြဿနာတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အရောင်အသွေးဟာလည်းပဲ လေဆာမီးလုံးရဲ့ သက်တမ်းကုန်သည်အထိ တစ်သမတ်တည်း အရောင်အသွေး စုံလင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ထွက်ပိုင်းအတွက် Contrast ratio-500,000:1, Throw ratio-1.28:1 to 1.88:1, Aspect ratio-16:10 တွေရှိပြီးတော့ screen size 40” ကနေ 300” အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Don’t compromise on amazing images. Sony’s advanced BrightEra 3LCD projection engine delivers bright, detail-packed pictures withagenerous 5,000 lumens of brightness and rich, stable colors. It’s the ideal way to present finer detail in PC presentations, videos, or multimedia signage.
The powerful Z-Phosphor laser light source offers up to 20,000 hours of virtually zero maintenance operation without the worry of sudden lamp failures, reducing lifetime running costs compared with traditional projector lamps. Constant Bright maintains steady light output levels throughout the laser’s rated lifespan.